Samadhan News कसका लागि संसद पुनःस्थापना गर्ने – SAMADHAN NEWS
कसका लागि संसद पुनःस्थापना गर्ने
यो आलेखको आरम्भमा सर्वप्रथम तीनवटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु ।सप्तरी पथरीका मलर सदा मुसहरले भोककै कारण यही वर्षको मध्य जेठतिर ज्यान नै गुमाउनु पर्‍यो ।
घरमा चार दिनदेखि चुल्हो नबलेपछि खाद्यान्नको जोहो गर्न निस्केका उनको पीडादायी मृत्यु भयो । जुन अस्वाभाविक थियो । उनको निधनले समाजवादको नारा बेचेर करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको सरकार र सदनलाई गिज्याइरहेको थियो ।
हुन त भोक र प्यासको अभावमा दैनिक जसो ज्यान गुमाउने मलर सदाहरु जस्ताको रेकर्ड राखेको भए सायद धेरै ठेलीहरुभरी सक्थे होलान् ।
दोस्रो उदाहरण, गत वर्ष असोज ताका मृगौला डायलसिसका लागि रौतहट बाटराजधानी आउने क्रममा रुपलाल शाहको बाटोमै मृत्यु भयो । पैसाको अभावले उनले समयमै डायलसिस गराउन सकेका थिएनन ।
जीवन जोगाउन सहयोगको याचना गर्दै राजधानी हिँडेका ३५ वर्षीया रुपलालको जिजीविषा सडकमै सकियो । त्यसैको आसपासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेशमा गएर मृगौलको डायलसिस र फलो अप गरेर फर्केका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल सिंगापुरमा उपचार गराएर स्वदेश फिरेकी थिइन् ।हाम्रो समाजवादको अभ्यासमा असमनाताका यस्ता बिर्सनलायक थुप्रै नजिर छन् । सेवा, सुविधा र अवसरको बाँडफाँडमा देखिने विभेदको अवस्था विकराल छ ।
तेस्रो उदाहरण, भर्खरै मात्र रामजी रामपैसा नभएकै कारण चिकित्साशास्त्रको परीक्षा दिनबाट बञ्चित भए । भलै पछि उनले परीक्षा दिएका छन् ।
आम रुपमा उनको गरिबीको कसरी खिल्ली उडाइयो र अपमान गरियो । त्यसको लेखाजोखा गर्नै सकिँदैन ।पैसाको अभावमा कैयन रामजीहरुले आफनो भविश्य र लक्ष्यलाई तिलाञ्जली दिएर बाटो मोडेका प्रशश्त प्रमाण छन् ।
मलर सदा, रुपलाल र रामजी रामका पिडा केवल लाखौं नेपालीले भोगेका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । अब चुरो कुरा तर्फ लागौं ।
अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद पुनःस्थापनाको मुद्दाको बारेमा टिप्पणी गर्ने कसैलार्ई अधिकार छैन । तसर्थ यो बारेमा समय खेरा नफालौं ।यो अब अदालत र कानुनको तजबिजीमा पुगिसकेको छ ।
दिनहुँ जस्ता घटने माथि उल्लेखित यस्ता समस्या समाधानमा अहिले संसद पुनःस्थापनाको चर्काै माग राख्ने निवर्तमान संसदहरुले के भूमिका निर्वाह गरे ?
संंसद हुनु र नहुनुले मलर सदा, रुपलाल र रामजीहरुको जीवनमा के अर्थ राख्यो ?कामरेडहरुले सिंगापुर बैंकक र न्युयोर्कमा उपचार गराई राख्दा अरु रुपलाल बन्न विवश भइराखेका पात्रहरुले संसद फेरि पुनःस्थापना भयो भने के पाउँछन् ? भोकै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका अरु लाखौं मलर सदाका लागि के हुन्छ ?
पैसा नभएकै कारण पढ्न र परीक्षा दिन नपाएका बाँकी रामजी रामले के पाउनेछन्?अनि अझ महत्वपूर्ण कुरा त हिजो संसद हँुदा यी समस्याहरुको के कति सम्बोधन भए?सम्बोधन गरेका भए यो विकराल अवस्था किन आयो ?
बझाङ र बाजुरेली अहिले पनि नुनकै लागि घन्टौं हिँड्न बाध्य छन् । कैयन हुम्ली र डोल्पालीलाई चामलको भात खाना दसैँ नै कुर्नुपर्ने विवशता छ ।महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा, अनि नवलपरासीको थारु बस्तीमा गर्मीमा लु लागेर र जाडोमा शीतलहरले वर्षौं ज्यान गुमाउनेको संख्या उत्तिकै छ ।
कामरेड यो विवशताको अन्त्य गर्न निम्ति हिजो तपाइँ सांसदहरुले के भूमिका निर्वाह गर्नु भयो ? यस्ता दर्दनाक समस्या त ठेलीका ठेली छन् । अब तपाईहरुलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले सांसद बन्ने बाटो खुलाई दियो भने यी समस्याको हल हुन्छ ? अवश्य हुँदैन ।
मात्र तपाइँ हरु फेरि एकथान सांसद बन्नुहुन्छ । देउवा, खनाल, दाहाल, नेपाल या ओली को प्रधामन्त्री,को राष्ट्रपति बन्ने भन्ने रस्साकस्सीमै रम्नु हुनेछ ।कुन गुट, समूह हावी हुने भन्ने दाउपेचले नै प्रथामिकता पाउनेछ। अनि रुपलाल, मलर र रामजीहरुले तपाइँहरु सांसद हुँदाके पाए ? अहिले नहुँदा के गुमाए ?
भोलि फेरि हुनु भयो भने के पाउनेछन्?वास्तवमा केही गुमाएका पनि छैन्न र केही पाउँदैनन् भने तपाइँहरुका लागि फेरि किन ननभेज आन्दोलनगरिदिनुपर्ने ? सत्र हजारको ननभेज आन्दोलनले के दियो ? दियो त केवल उही भोक, प्यास, अभाव, गरिबी, नाताबाद, कृृपाबाद भ्रष्टाचार बेथिति । अरु चित्त बुझ्दो जवाफ छ कामरेड ।
विल्कुल छैन । २०४६ पछिको पनि कुरा नगरौं । किन कि त्यसबेला राजसंस्था पनि थियो । अब भन्नुस् विसं २०६४ पछि तपाइँहरु नै होइन र, पटकपटक सांसद र मन्त्री बन्नु भएको ।
आखिर के भयो । अहिले सडकमा संसद पुनःस्थापनाका लागि जनतालाई आन्दोलित हुन आह्वान गरिराख्दा यी प्रश्नहरुको जवाफ छ ?
उसो भए पुनःस्थापना कसका लागि ? यसको मतलब विघटन सहीया गलत थियो भन्न खोजिएको होइन । मात्र बाँकी लाखौं मलर, रुपलाल र रामजीहरुले के पाए भन्ने सवाल हो । के पाउनेछन् भन्ने हो ।
संसद चाहियो भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हिँडनेहरुसँग अरु थप जिज्ञासा छ ।
कृषिमन्त्री भएर कृषकलाई मल दिन नसक्ने,उखु किसानको समस्या हल गर्न नसक्ने, सिद्धान्त र आदर्शका पाठ पढाउने तर काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि सिन्को नभाँच्ने घनश्यामहरुलाई फेरि मन्त्री बनाउन जनताले ननभेज आन्दोलन गरिदिनु पर्ने !
बोलेर देशलाई नै कायपलट गर्ने सपना बाँड्ने । तर एउटा बाख्रापालनमा पनि आफू सफल हुन नसक्ने योजनाविहीन भाषणबाज गगनथापाहरुलाई फेरि सांसद बनाउन जनता सडकमा उर्लिदिनु पर्ने !कुरा चर्का गर्ने तर मन्त्री पड्काएपछि परिणाम दिन नसकेकायोगेशहरुलाई योग्य ठह¥याउन जनताले आन्दोलन गरिदिनुपर्ने ?
वाह क्या गजब छ ! यिनै पात्रका लागि भोकै बसेर । जाडोमा कठंग्रियर । बाढी र पहिरोमा पिल्सिएर । उपचारको अभावमा छटपटिएर । आम निर्दोष जनताले फेरि बलिदानी दिन तयार हुनुपर्ने । जनतालाई फेरि सडक तताउन आह्वान गर्ने आँट पनि कसरी आउन सकेको । सोच्नुस् त कति उदेक लाग्दो छ ।
सम्धीले सांसद बन्ने अवसर पाएकै थिए । भतिजले राजदूत पडकाएकै छन् । ज्वाइँ, छोरीहरु सेटल भएकै छन् । भाइहरु वाणिज्यदूत बनेकै छन् ।सर्पपालन केन्द्रले पैसा पाएकै होला ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई होलीवाइन कार्यक्रमको टेन्डर पार्न संसद नभएपनि रोकावट छैन होला। हाइड्रोको विवाद मिलाउनर कमिसन लिन संसद नहुँदैमा सकस हुने कुरै भएन । यी काम त संसद नभएपनि चलि नै हाल्छ । अनि कस्का लागि र केका लागि संसद चाहियो भन्दै थाल ठटाउन प¥यो । हिजो हुँदा पनि भएको यहीर यत्ति नै हो ।
फेरि पनि कुनै चित्त बुझ्दो अर्को जवाफ छ भने भन्नुस् । रुपलाल,मलर र रामजीहरुलाई संसद पुनःस्थापना हुदा के हुनेछ ?
तपाईंहरुलाई मन्त्री बनाउन । तपाइँ का नातागोता, आफन्त र छोराछोरीलाई सरकारी सम्पत्तिमा ऐस आराम गराउन सर्वसाधारणले सडकमा आएर टाउको फुटाउनु पर्ने ? पुलिसको लाठी खाइदिनुपर्ने ?
घाइते बनिदिनुपर्ने ?आन्दोलनमा आउन जनतालाई आह्वान गरी राख्दा ठण्डा भएर सोच्नुस् एकपटक ।जनतालाई कति वेबकुफ बनाउनु हुन्छ । कति धेरै दास ठान्नु हुन्छ । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा हाम्रोमा जस्तो देख्नु भएको छ ।
जहाँकेहीसीमित पात्रा सधै मालिक बन्ने र सर्बसाधारण उनीहरुले जति बेला जे भन्छन त्यसैको लहैलहैमा हिँडिदिनु पर्ने । तपाईहरुको कुर्सी मोह पुरा गर्न पटकपटक भ¥याड बनिदिनु पर्ने । के यो काइदा हो ?
सांसद र मन्त्री हुन अघिसम्म चप्पल लगाएर चकटीमा बस्ने तपाईंहरु । जीवनमा कुनै पेसा व्यवसाय गर्नु भएन । तर आज करोड, अर्बको मालिक हुनुहुन्छ । ठूला मेगा प्रोजेक्टको सेयर होल्डर हुनुहुन्छ ।
यो कसरी सम्भव भयो ? कुनै उत्तर छ ? अहं विल्कुल तपाइँहरुसँग छैन । अब फेरि भन्नुस् तपाईंहरुलाई अरु थप धनाढय बनाउन । तंपाईहरुका लागि सर्बसाधारण सडकमा आइदिनु प¥यो ।क्याबात छ नेताज्यू!जनतालाई सधै दास नसम्झनू । भेडा बनाउन नखोज्नुस् ।
यो त एक्काइसौं शताब्दी हो । जनता बदलिसके । सोच बदली सक्यो । अब देश बदल्ने हो । मलर, रुपलाल, र रामजीहरुको अवस्था र स्तर बदल्ने यात्रातर्फ लाग्ने हो ।
समृद्धि र सुशासनका लागि एकाकार हुने हो ।परिवर्तनको यात्रामा जुन पात्रामा त्यस्तो अठोट र भिजन भेटिन्छ उसैको पक्षमा वकालत गर्ने हो ।
अब त्यो दिशातर्फ उन्मुख हौं । न कि फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउने आन्दोलनलाई प्रश्रय नदिऔं । समाधानका लागि विकल्पहरु मध्य बाट उत्तम विकल्प नै रोजौं ।
यी पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई छिटो फेरबदल गर्न सकिने लोकतान्त्रिक उपाय नै रोजौं । न किरुपलाल, मलर र रामजीहरुको पीडा बुझन सक्ने नेतृत्व छिटो पाउन सकियोस् ।
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाले नै जनताको आवाज बोल्ने हो । तर जनताको आवाज नसुन्ने पात्रहरुको विकल्पमा फेरि पनि छिटै नयाँ पात्र चयन गर्नु नै अर्को विकल्प हो ।
उनीहरुको विदाई नै उत्तम उपाय हो ।अन्त्यमा संसदको विकल्पमा संसद नै हो । तर लाखौं मलर, रुपलाल र रामजीहरुको आवाज बोल्न सक्ने।खारिएका र फेरिएका पात्रसहितको संसद । बरु त्यसका निम्ति हामी जनता फेरि एकपटक चनाखो हुन जरुरी छ ।
(पोखराका पत्रकार अधिकारी अचेल युरोपमा छन्)